मिस नेपाल सृस्‍टि श्रेष्ठद्वारा आत्महत्या प्रयास ! – plus977.net
नेपाली फिल्म कि अभिनेत्री एवम मिस नेपाल २०१२ सृस्‍टि श्रेष्ठ गत साता उनका प्रेमी नायक सौगात मल्लको जन्मदीन कै दीन घरमै दुर्घटनाका कारण हस्पिटल भर्ना भएको खबर बाहिरियो । उनी अस्पातल भएसंगै बजारमा ननाथरी हल्लाहरु आए । धेरैले भने ‘ सृस्‍टिले आत्महत्याको प्रयास गरेकी हुन ‘ । यस्ता हल्ला बजारमा आए संगै सृस्‍टिले हस्पिटलबाटै एक पोस्ट गरिन जसमा उनले सामान्य दुर्घटनाका कारण हस्पिटल भर्ना भएको जानकारी गराइन ।
यसैबीच आज नागरिक न्युजले यस घटनाबारे एक खोजमुलक सामाग्री प्राकाशित गरेको छ , जुन न्युजको आसय सृस्‍टिले आत्महत्या प्रयास गरेको भन्ने नै छ ।
नागरिक न्युजको समाचार :
पूर्व मिस नेपाल सृष्टि श्रेष्ठ शनिबार दिउँसो अचेत भएपछि थापथलीस्थित नर्भिक अस्पताल पुर्‍याइयो। सृष्टिको दायाँ हातको हत्केलामाथि नाडीमा चोट लागेको थियो। हातको नसाको केही भाग काटिएर अचेत भएकी उनको आकस्मिक अप्रेशन गरियो। त्यसपछि उनलाई डिलक्स वार्डमा सारियो।
पूर्व मिस नेपाल एवं अभिनेत्री सृष्टिको उपचारमा डाक्टर ज्योती रायमाझीको टोली परिचालन भएको थियो। सृष्टिलाई राखिएको डिलक्स वार्डमा भेटिएका उनी निकट अभिनेता सौगात मल्लले दराज लडेर किच्दा ऐनाले दाहिने हातमा घाउ भएको दाबी गरे। उनी यस्तो दावी गरिरहँदा असामान्य देखिएका थिए। हडबडाउँदै कुराकानी गरिरहेका उनी नर्भस देखिन्थे।
घटनाको प्रकृति सौगातले दावी गरिएझै सामान्य थिएन। अस्पताल प्रशासन र सृष्टि निकटबाट आएका भनाइ र तथ्य केलाउँदा अझै पनि त्यहाँ धेरै प्रश्नहरु अनुत्तरित रहन्छन्। आखिर सृष्टिलाई भएको के हो? अस्पताल स्रोतले मंगलबार पुष्टि गरेको छ। स्रोतका अनुसार सृष्टिको नाडीमा लागेको चोटको प्रकृति दराज खसेर सिसाले काटिएको जस्तो थिएन। घाउ हुँदा काटिएको चोटको प्रकृति सिसाको मोटाइ अनुसारको थिएन। त्यो पातलो धार भएको धारिलो सामाग्री प्रयोग गरेर काटिएको प्रकृतिको थियो।
‘चोटको प्रकृति ब्लेड लगायतकाको पातलो धार भएको सामानको प्रयोग गर्दा लाग्ने प्रकृतिको थियो,’ नर्भिक अस्पताल स्रोतले नागरिकन्युजसँग भन्यो ‘नाडी काटिएकाले काट्दा बल प्रयोग भएको देखिन्छ।’ प्रायः हातको नाडी काटेर आत्महत्या प्रयास गरेका घटनामा यस्तो प्रकृतिको चोट देखिने गरेको अस्पताल स्रोतले बतायो।
सृष्टिको घटनाबारे प्रहरी भने बेखबर छ। उनी बस्ने क्षेत्र पुल्चोकका प्रहरीलाई घटनाबारे जानकारी छैन। न त अस्पताल क्षेत्र पर्ने महानगरीय प्रहरी बृत्त सिंहदरवार या महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई यसबारे केही बताइएको छ। तथ्य एकातिर र बताइएको कथ्य अर्कोतिर देखिँदा सृष्टि बेहोस हुनुको कारण अझ रहस्यमय बनेको छ। घटनाबारे सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टिका टिप्पणी आइरहँदा सृष्टिका धेरै शुभचिन्तक चिन्तित छन्।